२. चुनौति – नेपाल कानुन आयोग
२.१ तराई र भित्री मधेशको करिब १ लाख हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ । मध्य पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा खोरिया फडानी गर्ने कार्य बन्द भएको छैन । तराई र भित्री मधेशमा वन विनाश र क्षयीकरणमा सुधार भएको छैन । दक्षिणको सिमावर्ती क्षेत्रका समुदायको वन स्रोतमा पहुँच स्थापित गर्न सकिएको छैन । चुरे क्षेत्रको अनुचित दोहनबाट भावर र तराई क्षेत्रको उर्वरा शक्तिमा ह्रास आउन थालेको छ । हिमाली क्षेत्रको उचित संरक्षण हुन नसक्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ । संक्रमणकालीन राजनैतिक अवस्थाको प्रभाव वन क्षेत्रको संरक्षणमा देखा परिरहेको छ ।
२.२. सम्भावना हुँदाहुँदै पनि वन क्षेत्रको उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन । संरचनागत समस्याको कारण वन पैदावारको आपूर्ति सहज हुन सकेको छैन । वन विस्तार, संरक्षण र उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता उत्साहवद्र्धक छैन । महत्व र प्राथमिकताको आधारमा पर्याप्त साधन र स्रोतको परिचालन वन क्षेत्रमा हुन सकेको छैन । विभिन्न वनस्पति र जीवजन्तु लोप भइसकेका छन् भने केही संकटापन्न छन् । बाढी, पहिरो, भू÷क्षय र पानीको स्रोत कम हुने समस्या बढी रहेको छ । हिमतालको विष्फोटनबाट जन, धन तथा प्राकृतिक सम्पदाको विनाश जस्ता समस्या पनि देखिएका छन् ।
२.३. वन पैदावारको अत्यधिक र अवैध संकलन, चोरी निकासी तथा वन्यजन्तुको अवैध शिकार र व्यापार समस्याको रुपमा देखा परेको छ । नदी कटान, भू-क्षय, वन डढेलो, अनियन्त्रित चरिचरन, ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको अनियन्त्रित संकलन तथा निकासीबाट संरक्षण र व्यवस्थापनमा समस्या आएको छ । मानव र वन्यजन्तुबीचको बढ्दो द्वन्द चुनौतिपूर्ण भएको छ । मिचाहा प्रजातिका कारण रैथाने वनस्पति र वन्यजन्तुमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माण र वातावरण सरक्षणबीच सन्तुलन हुन सकिरहेको छैन । वन क्षेत्रको सुशासनमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
Total Users : 502327